Sirtii Qarsoonayd ee Quixtar oo La Fashiliyay ... Q.1aad
Dadkaasi waa kuwo wax usii iibinaya shirkadda lagu magcaabo Quixtar, shirkadaas oo sheegtay waxyaabaha ay iibisey ilaa sannadkii 1999 in qiimohoodu uu gaarayo $3 billion, dadka shirkadaas leh waxa ay sheegeen in qaab dhismeedka shirkadaasi ay ka dhigtay taajiriin. Laakiin ujeeda ugu weyn ee shirkadaasi waa in ay dadka alaabta u iibinaya u sheegto in ay sidaas oo kale ayaguna sameeyaan si ay u lacagaystaan. Sidaas waxaa ku bilaabmay barnaamij dheer oo May 7, 2004 laga soo daayey Telefishanka Maraykanka ee NBC, barnaamijkaas oo baaritaan iyo dabagal qoto dheer ku sameeyeey Quixtar oo ah shirkad dadka u ballan qaada in ay si fudud ku taajirayaan.
Haddaba inta aynaan xusin waxyaabihii uu daah furay ama soo ogaadey TV-ga NBC, aan akhristayaasha xusuusino qaabka ay u shaqayso shirkada Quixtar: Ugu horayn si aad uga mid noqotid Quixtar waxa aad bixineysaa lacag hor marin ah, marka aad ka mid noqotid waxaa markiiba lagugu soo dhoweynayaa shirkada ayadoo laguu sheegayo in aad iibsatid cajalado ay ku duuban yihiin siyaabaha aad markiiba u faa'iidi lahayd, waxaana markiiba soo dhoweynta hore kaaga baxaya ugu yaraan $200. Taas marka aad bixisidna waxa aad ku dhacday dabinkii u horreeyey, waayo waxaa markiiba laguu tilmaamayaa in aad sannad gudihiis ku taajiri doontid haddii aad soo xera gelisid dad kale, isla mar ahaantaasna aad iibisid waxyaabaha ay soo saarto shirkadu. Waxaana markiiba si qeyru caadi ah laguugu ballan qaadayaa taajirnimo kuula muuqaneysa riyo. Waxaa lagugu casumayaa in aad timaadid goobo ay ku shiraan dhammaan dadka shirkada kujira ee deggan aagga ama gobolka aad deggan tahay, waxaana dhici karta in meesha kulankaas lagu qabanayo ay aad kaaga fogtayay oo ay tahay in aad baaruur u qaadatid ama diyaarad u raacdid, kaddibna aad degtid hoteel hoos yimaada shirkadaas ama ay gacan saar leeyihiin: u fiirso halkaas:- waxaa dhici karta in lagugu qanciyo in aad raacdid bas ay shirkadu leedahay, kaddibna aad seexatid hoteel shirkada u kiraysan, marka aad halkaas tagtidna in marka shucuurta dadka aad aratid in lagugu hago sidii aad u iibsan lahayd cajalado kale oo laguugu sheego in aad ka heli doontid furihii guusha: Dhammaan arimahaas adiga ayaa kharashka iska bixinaya - baska, hoteelka, cuntada iyo cajaladaha iyo buugaagta.
DAAWO video: Barnaamijkii NBC ay ka diyaarisay Quixtar. Sidoo kale Akhri Jawaabtii Quixtar ka bixisay Barnaamijka NBC
Haddii aad rabtid in aad waxbadan ka ogaatid Amway/Alticor/Quixtar AKhri halkan... [English Version] - waa Websiteka Jaamacadda Carnegie Mellon University.
Waxaa taas ka daran in lagugu qanciyo haddii aad toban qof keentid in aad muddo gaaban ku taajiri doontid, oo aad gaari doontid waxa loogu yeero heerka qalinka (bronze), kaddibna haddii dadkaasi ay keenaan kuwo kale ay dhici karto in aad u qalin jebisid derejada dahabka (gold), oo aad sidaas ku taajireysid. Ufiirso: waxaa lagugu qancinayaa in nidaamkani uu u shaqeeyo qaab xisaab ahaan u dhigma Saddex-xagalka Ahraamta sida ka muuqata sawirka dhanka midig ee boggan; Marka aad keentid toban qof, oo qof kasta oo tobankaas ka mid ah uu keeno toban kale, muddo gaaban ayaad ku gaari kartaa kumayaal qof oo kuu shaqaynaya; sidaas ayaa lagaa dhaadhicinayaa, taas oo weliba laguu sheegi doono in ay taasi tahay furaha guusha ee taajirnimada habeenka gudihiisa lagu gaari karo ee u eg riyada. Xaqiiqaduse waxay tahay in aad u shaqayneysid shirkadaas oo alaabta la iibsanayaa ay leedahay shirkadu, haddiiba la helo tiro intaas le'eg oo dad ah ay lacagtaasi ku dhici doonto jeebka shirkada, adiguna aad waqtigaagii ku lumisay in aad dad ku baridid in ay ka mid noqdaan shirkadaas, adigoo lacagta kaa baxday ka sokow ay kaaga baxdo maskax badan in aad daba orodid dad si ay uga mid noqdaan shirkadda.
Su'aashu waxay tahay: Soomaalidu deggan Maraykanka iyo canada dabinkaas ma ku dheceen? Soomaali shirkaasi xero gashatay ma la heli karaa? meeqa ayey arintaasi Soomaalida saamayn ku leedahay?. Jawaabta arintaan waxaan ku soo qaadan doonaa qormade dambe ee qoraalkan. Balse hadda aan dib ugu laabano xaqiiqada uu daah furay barnaamijkiisa caanka ah ee Dateline kaas oo May 7, 2004 laga sii daayey TV-ga NBC.
Quixtar saamayn intee le'eg ayey ku yeelatay Soomaalida daggan Maraykanka iyo Kanada, jawaabta waxaad ka heli doontaa qormada xigta... AKHRI HALKAN >>> [Soomaalida Deggan Woqooyiga Ameerika Maxay Kala Kulmeen "Quixtar"...]
Fadeexadii Paltalkga: iyo Dulmiga Walaasha Muslimada ah